भारतलाई चिढ्याउने गतिविधि सरकारले गरेको भन्दै डा. भट्टराईको आक्रोश – Namaste Dainik
May 21, 2020 NamastedainikLeaveaComment on भारतलाई चिढ्याउने गतिविधि सरकारले गरेको भन्दै डा. भट्टराईको आक्रोश
पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले वर्तमान सरकारले भारतलाई चिढ्याउने गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ । नेपालले आफ्नो भूमिसहितको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दुई देशका बीचमा बहस चलिरहेका बेला उहाले सरकारको गतिविधि ठीक नभएको बताउनु भएको हो ।
‘पछिल्लो समयमा सरकारका अभिव्यक्ति चित्त बुझ्दा छैन । अब सरकारले भारतसँग र चीन सँगको सम्बन्धलाई पनि समान रुपमा लैजान सकियो भने विदेशी लगानी भित्रन सक्छ,’उहाको भनाई छ । अहिले नेपाल न्यारोनिजम तिर जान खोजेको भन्दै देशको जटिल भूराजनीति र प्रचुर सम्भावना भए पनि साँधुरो र संक्रिण चिन्ताले तत्काल समस्याको समाधान खोज्न नसकिने बताउनु भयो ।
भारत र चीनसँग राम्रो सम्बन्ध विकास गर्न सकेको खण्डमा अवसर आउने बताउदै डा.भट्टराईले भन्नुभयो,‘केही समय यताका हाम्रा गतिविधि,सरकारको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिहरुको कृयाकलापले त्यो अवसरलाई झन गुमाउने र त्रासदी थप्ने सम्भावना मैले देखेको छु ।’ जनता टाइम्सबाट साभार